Factory flange dingana roa | Mpanamboatra flange amin'ny lafiny roa China, mpamatsy
Flange Stainless vy
Flange roa sosona
Firaka vy flange
Flange amin'ny vozony
Sary 8 Flange Flange
Fampiharana: Ny lahasa lehibe ataon'ny flange jamba dia ny mampisaraka tanteraka ny atody famokarana. Izay manakana ny vavahady mihidy tsy hanidy akaiky, avy eo misy fiantraikany amin'ny famokarana, ary miteraka lozam-pifamoivoizana mihitsy aza.
Fampiharana: Ny flanges dia ampahany tsy miankina amin'ny tetikasa injeniera sy fantson-drano maro. Ampiasaina amin'ny sehatra maro samihafa, toy ny fitaterana (fantsom-pitaterana, sambo) misy solika, gazy, rano sns, ny toeram-pamokarana sy ny famokarana herinaratra, ny akora simika ary ny zezika simika, ny flanges dia karazana sy endrika maro karazana. , ary ny fitaovan'izy ireo koa dia miovaova (vy ambany karbaona, vy kely firaka, vy tsy misy fangarony, vy firaka avo, vy tsy ferrous, na toy izany) mifanaraka amin'ny karazan-tsiranoka sy tontolon'ny serivisy.
Atsofohy amin'ny flange, antsoina koa hoe flange SO. Izy io dia karazana flange slide amin'ny fantsona misy endrika anatiny izay lehibe kokoa noho ny fantsona. Satria ny savaivony anatiny amin'ny flange dia somary lehibe kokoa noho ny savaivony ivelany amin'ny fantsona, ny flange SO dia azo ampifandraisina mivantana amin'ny fitaovana na fantsona amin'ny alàlan'ny fantsom-bokatra eo an-tampon'ny sy any ambanin'ny flange. Izy io dia ampiasaina mba hampidirana ny fantsona amin'ny lavaka anatiny ao anaty flange.
Ny flange socket dia notsorina ho toy ny flange SW, misy faritra voafintina (toy ny soroka) ao anaty flange, ity soroka ity dia mitarika ho amin'ny fametrahana ny halalin'ny fantsona nampidirina tao anaty flange. Socket welding flange dia natao ho an'ny rafitra fantsom-pandrefesana savaivony avo lenta.
Flange misy kofehy
Fampiharana: Ny flanges misy kofehy dia ampiasaina amin'ny toerana sarotra ahodina na tsy azo fefy, toy ny flanges vita amin'ny kofehy ampiasaina hiarovana ny sosona fantson-drano. Ho fanampin'izany, tsy tokony hampiasaina amin'ny fantsona misy fiovan'ny mari-pana miverimberina na mihoatra ny 260 ℃ ary eo ambany -45 ℃ koa.
Noho izany, ny vidin'ny fametrahana ny flange welding, ny vidin'ny asa ary ny vidin'ny fitaovana fanampiny dia avo kokoa, satria mihoatra ny iray ny dingana.